Inona | mTomady.mg
Inona moa ny mTOMADY?
Fanafody ho an’ny bevohoka
Ny fihinanana “fer“ sy “acide folique” isan-andro dia manampy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ary mampihena ny mety ho fahaverezan-drà. Atolotry ny mTOMADY maimaimpoana ho anao ireo fanafody ireo sy ny albendazole hiadina amin’ny kakana.
Ny fanaovana “echographie” na ny fitiliana an-tsary, dia ahitana ny fitombon’ny zazakely ao an-kibo ary afahana misoroka ara-potoana ny olana mety mitranga. Atolotry ny mTOMADY maimaimpoana ho anao ny echographie, izay tanterahina rasazy manana mari-pahaizana manoka amin‘izany
Raha sendra misy fahasarotana mandritra ny fitondrana vohoka ka ilana ny fandefasana anao avy ao amin’ny CSB makany amin’ny hopitaly lehibe dia handefasan’ny mTOMADY ambulance ianao. Raisin’ny mTOMADY an-tànana avokoa ny lany amin’izany fandefasana.
Hafaingano ny fanangonanao vola tahiry. Mahazoa tombony hatramin’ny 50% avy amin’ny mTOMADY amin’ny taham-bola miditra ao amin’ny kaontinao mTOMADY, na vola narotsakao, na avy amin’ny namanao na avy amin’ny fianakavianao. Tsindrio ny *579# raha mampiasa Airtel ianao na ny #111*1*5*4*2# raha toa ka Telma ny laharana finday ampiasainao.
Antsoy haingana ny 556 raha mila fanazavana fanampiny.
Fitsaboana tsara kalitao
Eny amin’ny CSB miara-miasa amin’ny mTOMADY, dia fitsaboana tsara kalitao no azonao. Satria mahazo fanampiana ara-pitaovana, fiofanana ary toro-hevitra fanatsarana izy ireo.
Manampy anao manangom-bola sy manefa ny ho lany mandritry
ny fitondrana vohoka sy amin’ny fiterahana ny mTOMADY. Tsy azo
ampiasaina amin’ny zavatra hafa anefa. Mandefa SMS mampahafantatra
sy mampahatsihy anao ny vola mila tratrarinao alohan’ny fiterahana.
Manampy anao manangom-bola sy manefa ny ho lany mandritry ny fitondrana vohoka sy amin’ny fiterahana ny mTOMADY. Tsy azo ampiasaina amin’ny zavatra hafa anefa. Mandefa SMS mampahafantatra sy mampahatsihy anao ny vola mila tratrarinao alohan’ny fiterahana.